Nentim-paharazana fanadihadiana mihidy, mankaleo, dia nesoriny avy amin'ny fiainana. Ankehitriny isika dia afaka manontany fanontaniana nandinika lalina kokoa eo amin'ny fiainana, misokatra kokoa, sy ny maro hafa mahafinaritra.
Ny fanadihadiana diso tanteraka sehatra mampirisika mpikaroka mba hieritreritra momba ny fanadihadiana fikarohana toy ny ampahany roa dingana: mpilatsaka namaly ka nanontany azy. Ao amin'ny fizarana teo aloha dia niresaka ny fomba nomerika taona ny manova ny fomba handray namaly, ary izao aho hiresaka ny fomba ahafahan'ny taona nomerika fomba vaovao ny mametraka fanontaniana. Fomba vaovao ireo azo ampiasaina amin'ny santionany na mety na tsy mety santionany-.
Ny fanadihadiana dia ny tontolo iainana fomba izay ny fanontaniana dia nanontany, ary afaka manana fiantraikany lehibe eo amin'ny fandrefesana (Couper 2011) . Tamin'ny vanim-potoana voalohany ny fanadihadiana fikarohana ny fomba mahazatra indrindra dia face-to-tava, ary amin'ny vanim-potoana faharoa ny fomba mahazatra indrindra dia telefaonina. Maro ny mpikaroka mihevitra ny vanim-potoana fahatelo ny fanadihadiana fikarohana toy fotsiny ny fanitarana ny fanadihadiana fomba mba ahitana solosaina sy ny finday. Na izany aza, ny vanim-potoana nomerika dia mihoatra noho ny fiovana eo amin'ny fantsona amin'ny alalan'ny fanontaniana sy valiny izay mikoriana. Kosa, ny fandalovana amin'ny analogue ho nomerika mahatonga-ary dia azo inoana fa mitaky-mpikaroka mba hanova ny fomba mangataka.
Ny fanadihadiana nataon'ny Michael Schober sy ny mpiara-miasa aminy dia mampiseho ny tombony amin'ny fanitsiana ny fangatahana ho amin'ny fahaiza-manao sy ny fiaraha-monina fitsipika manodidina ny teknolojia vaovao (Schober et al. 2015) . Ao ny fianarana, sy ny mpiara-miasa nampitaha Schober fomba isan-karazany ho an'ny fametrahana fanontaniana ny olona amin'ny alalan'ny finday. Izy ireo feo nampitaha resaka, izay mety efa voajanahary fandikan-teny ny faharoa vanim-potoana ny fomba fijery, ny fanangonana tahirin-kevitra amin'ny alalan'ny hafatra maro, ny fomba fijery tsy misy mazava modely. Schober sy ny mpiara-miasa aminy hita fa mandefa SMS nahatonga ambony kalitao tahirin-kevitra noho ny feo dinidinika. Amin'ny teny hafa, antitra fomba fotsiny nafindrany teo teknolojia vaovao tsy ny tsara indrindra fomba. Kosa, mpikaroka dia tsy maintsy ampanjifaina ny fomba fangatahana ireo sehatra vaovao.
Misy lafiny maro miaraka izay mpikaroka dia afaka hanasokajiana fanadihadiana fomba, fa ny tena fanakianana endri-javatra amin'ny vanim-potoana nomerika fomba fanadihadiana dia izy ireo solosaina-itantanana, fa tsy mpanao gazety nametraka fanontaniana-itantanana (toy ny ao amin'ny telefaonina sy ny tarehiny-to-tava fanadihadiana). Mpanadina naka olona avy tamin'ny fanangonana antontan'isa dingana goavana manome tombontsoa sy mampahafantatra lafiny ratsy ny sasany. Eo amin'ny ny soa izy, manaisotra mpanadina mampihena be vola-fanadihadiana dia iray amin'ireo lehibe indrindra vola lany amin'ny fanadihadiana fikarohana-ary mampitombo manovaova; namaly afaka mandray anjara rehefa te, tsy rehefa misy mpanao gazety nametraka fanontaniana est disponible. Na izany aza, manala ny mpanao gazety nametraka fanontaniana ihany koa ny mametra ny fanadihadiana tamin'ny fomba sasany. Indrindra indrindra, mpanadina dia mitsikera ny mandrisika namaly handray anjara sy ny fitandremana azy ireo amin'ny alalan'ny slogging nirotsaka raha lava sy mandreraka indraindray fanadihadiana.
Manaraka, aho mamaritra fomba roa mampiseho ny fomba mpikaroka dia afaka manararaotra ny fitaovana nomerika ny taona mba manontany fanontaniana fomba hafa: mirefy anatiny kokoa fanjakana amin'ny fotoana sy toerana mety amin'ny alalan'ny tontolo iainana vetivety tombana (Fizarana 3.5.1) ary natambatra ny hery ny misokatra-tapitra sy akaiky-nihatra fanadihadiana fanontaniana amin'ny alalan'ny fanadihadiana Foundation (sampana 3.5.2). Na izany aza, ny hetsika ho amin'ny solosaina-itantanana, ubiquitous nanontany hoe koa midika fa tokony hanao ny mari fomba ny mametraka izay mahafinaritra kokoa ny mpandray anjara, ny dingana antsoina hoe gamification (sampana 3.5.3).